5lọ ahịa sofa XNUMX kacha mma na Barcelona | Njem zuru oke
Naanị ịbanye na ịchọ arịa ụlọ ọhụrụ dị ọnụ ala? You kpebiela na oge eruola ka ụlọ gị gbanwee site na ịrụzigharị arịa ụlọ? Na agbanyeghị onodu ịnọ n'ime ya, a na m akpọ gị oku ịga n'ihu na-agụ ihe, nihi na aga m agwa gị ebe ị nwere ike ịzụta sofas na Barcelona, na Ciudad Condal.
N'ihi na n'oge njem ị nwekwara ike iji ohere ileba anya na arịa ụlọ ị ga-achọ ịnụ ụtọ n'ụlọ gị, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, zụta.
Barcelona bụ obodo ebe ị nwere ike ịchọta ihe niile: site na nnukwu ụlọ ahịa akwụkwọ (dị ka FNAC), gaa na ụlọ ahịa sofa nwere ọtụtụ ngwaahịa na ọnụahịa nrọ. Ime nhọrọ nke ihe na-adọrọ mmasị bụ ntakịrị ọrụ siri ike, mana echere m na anyị enweela ihe ịga nke ọma. Lee ọ na-aga:
2 Reslọ Osisi Tresillo
4 Llitta sofas
5 Ntụsara ahụ
Dabere n'okporo ụzọ Barcelona si Cerdanyola del Vallés na nọmba 232, anyị na-ahụ otu n'ime ụlọ ahịa sofa kacha mma na mpaghara Barcelona. Ọ bụrụ na e nwere ihe anyị ga-achọ isi na ya pụta ákwà, ọ bụ nkwanye ùgwù maka nkà. Ofzọ ọ na-arụ ọrụ bụ ime sofa mpempe na enweghị nkwekọ mgbakọ, ka sofas ya wee nweta izu oke.
Mgbe e mesịrị, anyị enweghị ike ichefu na ha bụ ndị nrụpụta, nke a na-enye ha ohere mee ka sofa gị daba gị mma na ịhazi onwe gị, ka ha wee mee sofa nke ị bu n'uche mgbe niile mezuru. A na - achọta isi ihe ọzọ ya na ihe eji eme sofas, nke anyị nwere ike ịkọwapụta ihe owuwu ahụ na osisi Galician pine, osisi beech vapo dị n'ihu, ma ọ bụ akwa Italiantali.
N'ikpeazụ, anyị ga-agbakwunye na ụlọ ọrụ a sitere na agbụrụ ezinụlọ nyere ma ha na-elekọta ịdị mma na ha rere ụlọ ọrụ ndị ọzọ dị ka ndị na-ere ahịa, ruo otu ụbọchị, otu onye n’ime ha ghọrọ Tessuto.
Reslọ Osisi Tresillo
Dabere na Avenida Diagonal number 170, ọ bụ ụlọ ahịa ebe ị ga-ahụ oche oche oche, oche nkuku, pouff, yana doro anya, sofas ... nke ụdị niile!: akwa sofa, tradicional, izuikema Chaise Longue.
Enwere ụdị dịgasị iche iche ịhọrọ site na: akwa, akpụkpọ anụ, na agba na ụdị dị iche iche ... Obi abụọ adịghị ya, ụlọ ahịa ebe ị ga-anọ ezigbo oge na-ele ha niile anya, ebe ọ bụ na ọnụahịa dịkwa oke ala. Iji nye gị echiche, akwa oche abụọ nke oche polyurethane sofa na-efu gị naanị 436 euro.
Emi odude ke Calle Dr. Pi i Molist nọmba 44, nke a bụ shop-ogbako nke ahaziri na omenala sofas, na onye ngosi nke ihe kariri otu na kariri otu ghotawo ya siri ike nke ukwuu izere izuru ike n'otu sofas n'ụlọ.
Ọnụahịa ndị ahụ na-asọ mpi. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị m, a ga m agwa gị na ị nwere ike ịnwe oche atọ oche Chaise Longue naanị 950 euro ma ọ bụ sofa abụọ nwere oche iji zuru ike 975 euro.
Dịrị na Plaça de la Universitat, ha bụ ndị ọkachamara na sofa akwa ma nọrọ jụụ sofas. Dị ka ha na-egosi na weebụsaịtị nke ha, ha raara onwe ha nye iji meziwanye nkasi obi gị ihe karịrị 100 afọ. Yabụ na ha bụ ezigbo ọkachamara n'ọhịa.
Ebe i nwere ike inweta, na mgbakwunye na nke hotara na mbụ, a akwa sofa, akpama ọ bụ Ngwongwo eji achọ mma maka akwa.
Ọ dị na 151 Rocafort n'okporo ámá, ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa kachasị mkpa n'obodo. N'ebe a, ị ga-ahụ ọtụtụ akwa na sofas akpụkpọ anụ ị nwere ike hazie na ọtụtụ njikọta na nha. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịnweghị oge iji gaa hụ ha n'onwe gị, ịnwere ike ịzụta ozugbo na weebụsaịtị ha. Nhọrọ dị mma ịzụta sofas na Barcelona.
Site na ụlọ ahịa a ka ha chọrọ itinye ngwaahịa dị oke ọnụ na mkpịsị aka gị. Nke ukwuu ka i wee nwee ike ịnwe akwa oche gị nke atọ 813 euro, ma ọ bụ oche izu ike nke ejiri akwa mechie 538 euro.
Yabụ, ị maara, sofas dị ọnụ ala dị adị. Gaa na ụlọ ahịa ndị a n'oge ị nweere onwe gị ị were ụlọ ihe, n'enweghị obi abụọ, ga-abụ ihe kachasị mma ịzụrụ, na enweghị akpa gị na-ata ahụhụ maka ya
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » 5lọ ahịa sofa XNUMX kacha mma na Barcelona
E nwere ọtụtụ ihe dị mma karịa ndị akọwapụtara n'isiokwu ha maka ihe atụ DECOLEVEL.COM NA THELỌ ROCAFORT STRET 157, NA ỌZỌ AKA NA-EME AKW ATKWỌ AKW ATKWỌ AKW ATKWỌ AKW ,KWỌ AKW WITHKWỌ, NA EGO Kachasị mma maka akwa akwa site na ala.
Zaghachi ka Decolevel Sofas Mobles
Na Molist Sofas nọ n'elu 5 bụ ihe ọchị kachasị ọchị m nụrụ ruo ugbu a hahahahaha
Zaghachi Papa Pepe
Ha si mesoo m nke ọma; M na-ama na-atụ aro site ọzọ ahịa onye nwere afọ ojuju dị ukwuu; ma ha mere m sofa nke emere, nke dabara nke ọma; Anyị nwere ya ruo afọ 2 na ọ dị ka ihe ọhụrụ; maka m (echiche onye ọ bụla bụ nkwanye ùgwù) ọ bụ ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa kacha mma na barcelona
Zaghachi Mercedes Gomez Asensio
Maka m nke kachasị dị na sofas dị iche iche na ikuku dị mma, na-enweghị mgbagha bụ La Sofateria, dị oke ọnụ mana ọ ka mma.
Azụrụ m sofa na Molist Sofas na enwere m obi ụtọ.
Sofa ahụ a zụtara na Sofas Molist agbanweela m nke ọma; O ruola afọ iri ọ dị ka nke ọhụrụ. Ana m akọrọ isiokwu ahụ na ọ bụ otu n'ime ụlọ ahịa kachasị mma na Barcelona.
Zaghachi Juan Perez Hierro
GRANFORT dị ezigbo mma nke mere na ha mechiri afọ abụọ gara aga ma hapụ ndị mmadụ na-ejikọ, Gaa na peeji a, ọtụtụ mgbe njem HAHAHAJJA
Zaghachi Yolanda Ramos
Ebe obibi Firefly
Gịnị kpatara eji akpọ ya Barrio Húmedo?